Agaasimaha ciyaaraha Bayern Munich oo si weyn u amaanay Liverpool uu hogaaminayo tababare Klopp – Gool FM
Agaasimaha ciyaaraha Bayern Munich oo si weyn u amaanay Liverpool uu hogaaminayo tababare Klopp
(Europe) 18 Dis 2018. Agaasimaha ciyaaraha kooxda Bayern Munich Hasan Salihamidzic ayaa ka hadlay kulanka la wada sugayo ay kooxaha Bayern iyo Liverpool ku wada ciyaari doonaan wareega 16-ka ee tartanka Champions League.
Hasan Salihamidzic ayaa sidoo kale ka hadlay sida ay mar kasta u daawadaan Chanal-ka rasmiga ah ee kooxda Liverpool, iyo kulamada ay Reds ka ciyaarto tartanka Champions League iyo xaaladaha kala duwan labada kooxood ee tartamada gudaha.
Agaasimaha ciyaaraha kooxda Bayern Munich ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ugu horeyn hadalkiisa ku bilaaway:
“Liverpool ayaa ciyaari doonta kubad fiican, waa kooxda hogaanka u heysa England, waa koox awood badan isla markaana leh xawaare xoogan, wuxuu noqon doonaa kulan weyn”.
“Waxaan rajeynayaa in kulankan aan kaga bilaawano si weyn, marna kuma ciyaarin anigoo ah ciyaaryahan garoonka Anfield, waxaan dooneynaa in aan qaab ciyaareed fiican kulankan ku qaadano”.
“Si aan u guuleysano, waa inaan noqonaa kuwa aad u fiican labada lugood ee kulankan, Liverpool waxay ka mid tahay kooxaha waaweyn ee garanaya sida loo maareeyo xaaladahan oo kale”.
“Mourinho wuxuu heystaa wakhti uu ku saxo qaladaadka jira kahor kulanka PSG” _ Denis Irwin
kooxda Real Madrid oo dharbaaxo xoogan kala kulantay Mauro Icardi